Maxaa u sabab ah in militariga Masar ka awood bataan kuwa Turkiga? - Idman news
Maxaa u sabab ah in militariga Masar ka awood bataan kuwa Turkiga?
Qiimeynta awoodda ciidan ee dal uu haysto waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo tirada ciidamada ee uu haysto – marka la isku daro kuwa keydka ah iyo kuwa shaqada ku jira. Waxayna ka koobnaanayaan, ciidamada Cirka, dhulka iyo badda. Sidoo kale waxaa la qiimeeyaa tirada shacabka caadiga ah ee haddii loo baahdo dagaal geli karta.
Sidoo kale waxaa la qiimeeyaa hubka, qalabka iyo saanadda kale ee ay haystaan militariga dalkasta, sida uu sameeyay wargeyska Global Firepower.
Qiimeynta sannadkan 2020-ka la sameeyay waxaa ka muuqata in Turkiga uu hoos u sii dhacayo. Masar waxay ku jirtaa kaalinta 9-aad halka Turkigana uu ku jiro kaalinta 11-aad. Waxaa u dhexeeya dalka Brazil oo sida muuqata ka awood badan Turkiga.
Haddaba sidee lagu qiimeeyay awood ciidan ee Turkiga iyo Masar?
Dhaqaale ahaan, Turkiga ayaa miisaaniyad aad u badan ku bixiyay dhanka ciidamada, balse Masar, waxay heysataa ciidamo dagaal geli kara iyo kuwa keyd ah oo ka badan Turkiga, sidoo kale, dhanka qalabka ciidamada dhulka ayey Masar ku sareysaa.
Balse, ciidamada Cirka waxaa awood wayn ku leh Turkiga oo haysta diyaarado dagaal iyo hub kale oo ka badan midka Masar.
Shacabka dalka Masar oo ku dhow boqol milyan oo qof ayaa tirada dadka dagaalami kara waxaa uu wargeyska Global Firepower ku qiyaasay in ay yihiin 43 milyan oo qof, halka kuwa hawgalka hore ka geli kara ay yihiin 36 milyan oo qof.
Wargeyska waxaa uu soo wariyay in Masar ay heysato 4,295 oo ah taangiyada dagaalka, 11,700 oo ah baabuur gaashaaman, 2,189 oo ah gantaallada goobta laga rido iyo 1,084 oo ah madaafiicda wax duqeeya.
Dhanka ciidammada badda ee Masar waxay lagu qiyaasay in agabka ay heystaan uu guud ahaan gaarayo 316.
Waxaa ay xukuumadda Qaahira sidoo kale haysataa siddeed gujis oo ah kuwa badda hoosteeda mukhuura, 45 markab oo ah kuwa kormeera xeebaha iyo 31 maraakiib oo ah nooca badda ku aasa miinooyinka ama burburiya miinooyinka badda lagu aaso.
Dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 82 milyan oo qof ayaa dadka shaqeeya waxaa lagu qiyaasay ku dhawaad 42 milyan oo qof, waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradooda uu wargeyska ku sheegay 735 kun oo askari.
Previous Dhibaatada qabsata Dadka Madow ee Caruur Caddaan ah korsada
Next DAAWO:-Nuxurka Khudbadii Madaxweynaha Soomaliya Ka Jeediyay Qaramada Midoobay.